Njem na Machu Picchu | Akụkọ Njem
Otu n'ime ebe kachasị anwansi n'ụwa, ebe njikọ dị n'etiti anyị na gburugburu ebe obibi na-ahụ anya. Machu Pichu. Lee nnọọ saịtị magburu onwe ya! Onye ọ bụla azu paaki na-asọpụrụ onwe ya ga-arịgo ugwu gaa Machu Pichu, mana ịga ije na iburu azu paaki abụghị naanị nhọrọ.
Taa ebe anyị na-aga dị na South America, na elu nke Peru, ileta Machu Pichu, otu n'ime Ebube asaa nke ụwa.
2 Ga Machu Picchu
Mkpọmkpọ ebe Ha dị elu karịa mita 2400. Dị na mpaghara Cusco, Kilomita 80 site na obodo nke otu aha. Oldfọdụ akwụkwọ ochie na-ekwu na mgbagwoju anya nwere ike bụrụ ebe izu ike nke Inca nke narị afọ nke XV, mana ịtụle mmemme ememme taa echiche nke na-achị bụ na ọ dị na mbụ rụrụ ọrụ dị ka ebe nsọ okpukpe.
Ihe ọ bụla, Machu Picchu, ugwu ochie na Quechua, ọ bụ a ihe ijuanya nke injinia ochie na ije. Ọ bụ ọkara n'agbata ugwu abụọ, Machu Picchu na Huayna Picchu, ebe ewuru ya nwere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụlọ 200 nke amalitere iwughachi na 70s.
Ihu igwe na-ekpo ọkụ ma na-ekpo ọkụ n'oge ehihie na oyi n'abalị.. Bụ a mpaghara mmiri, nke kachasị n’agbata Nọvemba na Machị, ya mere ọtụtụ ndị njem na-abịa n’oge ọkọchị site n’akụkụ ndịda ala na-enwe mmiri ozuzo oge niile.
Ihe mbụ ị ga-eme bụ atụmatụ, hazie na akwụkwọ tiketi ịbanye na saịtị ahụ, ihe nwere ike ịme ọtụtụ ọnwa tupu. Yabụ, na ụbọchị, ị ga-agbada ọrụ.
Ebe mmalite na ụzọ Machu Picchu bụ Cusco obodo. N'ime obodo kwesiri njem n'ihi na Ọ bụ isi obodo nke alaeze Inca na obodo dị oke mkpa n'oge na-adịghị mma. Ọ bụ Ihe ncheta hystoric nke mba y Ihe Nketa Uwa. E nwere ụka ị ga-eleta, enwere Plaza de Armas, ndị conven na foduru nke Inca urbanism nke mmeri ahụ jisịbeghị, ọ dabara nke ọma, ihichapụ.
Ugbu a, ọ bụrụ na njem bụ ihe gị, enwere ihe na-aga aka na Machu Picchu: the Inca nzọ ụkwụ. Routezọ a na-amalite na kilomita 82 nke okporo ụzọ ndị si Cusco gaa Machu Picchu. Ọ bụghị maka onye ọ bụla n'ihi na ị ga-eje ije ụbọchị anọ na abalị atọ, mgbe mmiri ozuzo na oyi na-atụ, mana ọ bara uru. Ọ pụrụ iche ịga ije na otu narị afọ, nke dị mkpa.
Ọ bụrụ na ị chọghị ịga ije nke ukwuu enwere ụzọ ọzọ dị mkpumkpu nke na-ewe naanị ụbọchị abụọ na otu abalị. O doro anya, ọ dịghị otu n'ime ụzọ ndị a na-eme naanị ya. Thezọ ije n'okporo ụzọ Inca dị iche iche karịa mmadụ 10 na mgbe ọnụnọ ndị ndu.
Ọ bụrụ na nke gị abụghị ihu igwe mgbe ahụ i nwere ike iru ebe ụgbọ oloko. A pụkwara ịzụta tiketi ụgbọ oloko tupu oge eruo, ihe dị ka otu ọnwa tupu oge ahụ. Gbọ oloko ahụ si n’ọdụ ụgbọ ala a na-akpọ Poroy nke dị nkeji 20 si n’obodo Cusco, ọ bụ ezie na ụfọdụ ọrụ si Ollantaytambo pụọ. Njegharị ahụ bụ awa anọ na-agwụ na Aguas Calientes ma ọ bụ obodo nke Machu Picchu.
Site na otu n'ime obodo abụọ a, otu ga-enwerịrị họrọ nrigo na ulo elu: ị nwere ike ịrịgo n'ime bọs, na naanị nkeji 20, ma ọ bụ i nwere ike gbagoo na ụkwụ n'ime otu awa na ọkara nke ije ije na-akwụghị ụgwọ. Ya mere, na nchịkọta, ruo ebe a ihe ị chọrọ bụ iji hụ na ụgbọ okporo ígwè na Aguas Calientes / Machu Picchu na tiketi mbata na nnukwu ụlọ (na, ọ bụrụ na ị na-eji ụgbọ ala gbagoo, ụgbọ ala kwa).
Ọnụ ụzọ mbibi ahụ sitere na 6 nke ụtụtụ Mana ị ga-ahụ ihe ịchọrọ ịga na mgbakwunye: ị nwere ike ikpokọta Machu Picchu na Huayna Picchu, ma ọ bụ ugwu ma ọ bụ na ụlọ ihe ngosi nka. Naanị mmadụ ole na ole ka a na-ekwe ka ha banye kwa ụbọchị, yabụ ọ dị mkpa ịzụta ha tupu ịhazi njem ndị ọzọ site na ụbọchị ahụ. Mgbe ụfọdụ, ụlọ ọrụ na-eme njem na-eme ka usoro a dị mfe ma ọ bụrụ na ọ bụghị, ị nwere ike ijikwa ha oge niile na weebụsaịtị www.machupicchu.gob.pe.
I kwesịkwara ịma nke ahụ ị nweghị ike ịbanye na nri, que ime ụlọ ịwụ ahụ dị n'èzí ogige ahụ na na ozugbo ị nwere ike ịrị ugwu ma ọ bụ ịrịgo na ụlọ ma ọ bụ anwụrụ ọkụ. N'ebe a ị gaghị enwe ike ịhapụ Templelọ Nsọ nke Condor, Templelọ Nsọ nke Windows atọ, ụlọ a ma ama nke Sun ... ihe niile mara mma.
Ugbu a, ịbịaru ebe a na eriteghị uru nke gburugburu ebe obibi bụ mmehie, ya mere, maka m ị gaghị echefu ya gara Huayna PicchuỌ na-arị elu dị egwu. O nwekwara ụlọ, nyiwe nke na-adaba na ihe efu, ọwara, nkume ndị a pịrị apị, foduru nke ebe e wusiri ike, oche Inca na echiche nke Machu Picchu na ebe mara mma ...
Huayna Picchu nwere ike ileta naanị ugboro abụọ, site na 7 ruo 9 nke ụtụtụ na site na 10 ruo etiti ehihie. Emechaa, a naghị ekwe ka onye ọ bụla bata n'ihi na ọtụtụ foogu na-akpụ ma ịga ije na ịrịgo dị egwu. Yabụ, ee ma ọ bụ ee ma ọ bụrụ na ịchọghị ịhapụ ugwu a na pipeline, ị ga-etinyerịrị ya mgbe ị na-agba akwụkwọ tiketi. Nhọrọ ọzọ ị ga-eleta bụ rịgoro na Putucusi inwe echiche ọzọ nke Machu Picchu ma ọ bụ kwa, nke gị Ugwu Machu Picchu, nke dị n'ihu Huayna Picchu.
Ugwu Machu Picchu nwere 3.061 mita nke elu na okporo ụzọ na-amalite site na nnukwu ụlọ elu n'onwe ya. Follow soro Circuit 1 wee rute na nbanye. Have ga-arịgo ọtụtụ, mana ọ naghị esiri gị ike ebe ọ bụ na ọ naghị adọkpụ ma dịkwa obosara. Gbakọọ kilomita abụọ nke na-eje ije na ya mere ihe karịrị awa atọ.
Ka ị na-arịgo, ị ga-ahụ etu Huayna Picchu na citadel siri dị na elu, ị ga-ahụkwa orchid mara mma. N'ikpeazụ, site n'elu ị nwere echiche dị egwu banyere nnukwu ụlọ ahụ na Osimiri Vilcanota. Yabụ ọ bụrụ na ịnweghị ike ịga Huayna Picchu n'ihi ihe ụfọdụ, ịgaghị enweta tiketi ahụ, dịka ọmụmaatụ, nke a bụ nhọrọ dị ukwuu nke na-agaghị emechu gị ihu.
Ozi bara uru banyere Machu Picchu:
Naanị mmadụ 400 ka a na-ahapụ kwa ụbọchị ekewa ụzọ abụọ nke 200.
akwụkwọ ọ dịkarịa ala otu ọnwa tupu.
Akwụkwọ mbata nke ugwu ahụ na-enye ohere nleta na nnukwu ụlọ na sekit atọ ya na ịnweta ụzọ ọzọ nke ugwu Machu Picchu.
Have ga-eji akwụkwọ gị na tiketi gị gaa ma mgbe ị gafere akara nchịkwa ọnụ ụzọ tinye aha gị zuru ezu na aha ahụ, ma n'ọnụ ụzọ ma n'ọnụ ụzọ.
A na-agụta ya na oge obibi ma ọ bụrụ na ị mee otu n'ime sekit atọ ahụ ma gbakwunye ụzọ ọzọ bụ awa isii.
kwere ka ị jiri ụlọ ịsa ahụ mee otu ugboro.
Ejula ihe karịrị obere akpa, jiri ihe na-asọ oyi, ugogbe anya maka anwụ na anwụ.
gaa leta ihe ngosi nka ya na ihe mgbe ochie, ubi botanical na otutu ihe ngosi.
nwee obi ụtọ na mmiri ọkụ nke Aguas Calientes
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » America » Peru » Njem gaa Machu Picchu